+1 209 763 8854 (eUnited States)
Zeziphi iindawo ezilula zokufunda isiTshayina kunezinye iilwimi?
Abantu abaninzi bathi ukufunda isiTshayina kunzima. Ngapha koko, ayisiyiyo. Ukongeza kwinto yokuba abalinganiswa baseTshayina bafuna umthambo wokukhumbula, amaTshayina nawo alula xa kuthelekiswa nezinye iilwimi. I-Chinese Pinyin imfutshane kwaye icacile, ibhalwe ngoonobumba besiLatin, kunye nenombolo ...Funda ngokugqithisileyo »
Abaphambukeli abathetha kakuhle isiTshayina benza oku!
Kutshanje, umfundi onesiseko esipheleleyo se-zero, emva kokufunda iiklasi ezintathu, undixelele ukuba uzotshintsha abe ngutitshala ogxile kwisiNgesi somlomo kuba engafuni ukufunda igrama yesiTshayina okanye izinto ezinxulumene ne-HSK, kodwa wayefuna ukufunda Olunye ulwimi lwemihla ngemihla, njengokuthi uBuyi ...Funda ngokugqithisileyo »
Yintoni uTitshala waseTshayina wamanye amazwe?
Abahlohli baseTshayina bamazwe aphesheya ngootitshala abafundisa isiTshayina ngokungqinelana nemigangatho yamanye amazwe, kwaye iithagethi zokufundisa ngabantu abavela kumazwe okanye kubuhlanga iilwimi zabo zezinye iilwimi. Ukusingathwa kweMidlalo yeOlimpiki kunye neMiboniso yeHlabathi kunike umhlaba ithuba elingakumbi ...Funda ngokugqithisileyo »
Ifowuni: + 1 209 763 8854 (eUnited States)
Ifowuni: +86 17365836697 （China）